Ny rindranasa iOS Home dia tonga amin'ny macOS Mojave hifehy HomeKit | Avy amin'ny mac aho
Ny rindranasa iOS Home dia tonga amin'ny macOS Mojave hifehezana HomeKit
Na dia sahirana aza i Apple naneho hevitra momba ny antony tsy hiarahan'ny iOS sy macOS amin'ny ho avy, ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanao ezaka mba hitondrana ny sasany amin'ireo rindranasa iOS mankany amin'ny ekosistra ao amin'ny birao Apple. Ny stock, Apple News, Recorder no ohatra vitsivitsy amin'izany, fa ny iray manintona ny saina indrindra dia ny fampiharana Home.
Hatramin'izao, ny hany fomba hifehezana ireo fitaovana rehetra mifanaraka amin'ny HomeKit napetraka ao an-tranonay dia amin'ny alàlan'ny iPhone na iPad. Na izany aza, amin'ny macOS Mojave, ho azontsika atao koa ny mifehy azy tsara amin'ny Mac, mety tsy niseho tao amin'ireo dobo be fanantenana.
Araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony, ny rindranasa Home dia hampiseho amintsika interface iray tena mitovy amin'ilay hita ao amin'ny kinova iPad, indrindra noho ny fizarana ireo singa teo amin'ny efijery. Avy amin'ity rindranasa ity dia hahafahantsika mifehy ny tsirairay amin'ireo fitaovana mifandray, ankoatry ny fahitana ireo sary farany izay noraketan'ireo fakantsary fiarovana. Noho io rindranasa io dia tsy ilaina intsony ny manana ny iPhone na ny iPad eo an-tànana hifehezana ny faharanitan-tsain'ireo fitaovantsika.
Ny zavatra tsy nohazavain'i Apple dia ny hoe manomboka izao, ny Mac no hiandraikitra ny maha-ivon-toeran'ny automatisation an-trano ao an-tranontsika. Hatramin'izao dia ilaina ny manana iPad na Apple TV hahafahana mitantana azy rehetra. Azo inoana fa ity fanazavana ity dia hazavaina amin'ny keynote manaraka amin'ny volana septambra, rehefa manolotra ireo maodely iPhone vaovao miaraka amin'ny vaovao tavela ao anaty fantsona i Apple, toy ny fanaony isan-taona, na dia azo inoana aza fa hita io fampahalalana io nataon'ny mpamorona talohan'io daty io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Mojave » Ny rindranasa iOS Home dia tonga amin'ny macOS Mojave hifehezana HomeKit
tvOS 12: ny vaovao sy ny fitaovana mifanentana rehetra
Pikantsary nihatsara tao amin'ny macOS Mojave vaovao ihany koa